Itoobiya iyo Mooryaanta Soomaaliya | allsanaag
Itoobiya iyo Mooryaanta Soomaaliya
Imaaraadka iyo Itoobiya oo ka wada hadlay Madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya.
Dawladda Imaaraadka iyo Soomaalida intooda badan ayaa waxay doonayaan in madaxweynaha soo socdaa uu noqdo Cumar Cabdirashiid cali Sharmaarke. Halka Itoobiya suuqa Bakaaraha, madaxweynaha Puntland iyo Mooryaantu ay iyagu doonayaan in masdaxweynaha soo socda uu noqdo saaxiibkood Xasan Culusoow.
Imaaraadku wuxuu xooga saaraysaa sidii ay Somalia uheli lahayd hogaan cusub halka Ethiopia ay ku dhagan tahay soo noqoshada Culusoow .Hadaba wafdi balaadhan oo uu hogaaminayo Raysulwasaaraha Ethiopia ayaa maalinimadii Jumcaha magaalada Abu Dhabi kula kulmay Raysulwasaare kuxigeenka Imaaradka ahna wasiirka arimaha madaxtooyada Sheekh Mansuur bin Zayed Al Nahyan.
Wafdiga Raysulwasaare Hailemariam ayaa waxaa kamid ah wasiirka arimaha dibada,wasiirka Difaaca iyo masuuliyiin kale.Ethiopia waxay sheegtay in Imaaradka iska afkarteen dhamaan qodobadii ay isla soo qaadeen oo arimaha gobolku qay ka ahayd.Lama oga in arintii ay isku hayeen ee musharixiinta
← Labo Askari oo ku dhaawacmay Dagaalkii ka dhacay Deegaanada Degmada Qandalla oo Bosaaso Lasoo Gaarsiiyey ISAAQLAND →